အီးယူရဲ့ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေးမရုပ်သိမ်းဖို့ အလုပ်သမားအဖွဲ့ရော အစိုးရကပါ ထုတ်ဖော်ပြော
30 ต.ค. 2561 - 10:26 น.
ကုန်သွယ်မှု အထူးအခွင့်အရေး (GSP) ရုပ်သိမ်းဖို့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ ဥရောပ ကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အလုပ်သမားအသင်းအဖွဲ့တွေ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ မရုပ်သိမ်း ဖို့အရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွေ ကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကုန်သွယ်မှု အထူးအခွင့်အရေး (GSP) ရုပ်သိမ်းခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေတဲ့အပြင် အစိုးရ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တခြားစိန်ခေါ်မှုတွေကိုပါ အကျိုးသက်ရောက် စေနိုင်လို့ ဥရောပကော်မရှင် အနေနဲ့ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေကို မပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်း သမ္မတရုံးရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်ညနေပိုင်း နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အဓိက လုပ်ကိုင်နေသူတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေလို့ အရေးယူမှုလုပ်ရင် ပြည်သူတွေကိုသာ တိုက်ရိုက် ဒါမှမဟုတ် သွယ်ဝိုက်ပြီး သက်ရောက်မှုရှိလာမယ်လို့လည်း သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပကော်မရှင်ဟာ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့မှာ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင် အသင်းအဖွဲ့တွေ အပါအဝင် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်း သီးခြားစီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနဲ့ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ - UMFCCI ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း အသင်းနဲ့လည်း တွေ့ဆုံပြီး သတင်းအချက်အလက်ရယူ မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဥရောပကော်မရှင်ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ဆန်စပါးထုတ်လုပ် တင်ပို့မှု အနေအထားနဲ့ ကုန်သွယ်မှု အထူးအခွင့်အရေး ရုပ်သိမ်းခဲ့ရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ သက်ရောက်မှု၊ ဆိုးကျိုးတွေ ကိုလည်းမေးမြန်းသွားတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဦးရဲမင်းအောင်က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်က စတင်ပြီး ပြန်လည်ရရှိခဲ့တဲ့ အီးယူရဲ့ ကုန်သွယ်မှု အထူးအခွင့်အရေး (GSP) ကြောင့် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာပဲ ၂၀၁၈ ခုနှစ်စာရင်းအရ လုပ်သားဦးရေက ၅ သိန်းဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။
ဥရောပကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဖွဲ့နဲ့ အလုပ်သမား ကွန်ရက် ၂ ခုက အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာ အလုပ်သမားတွေ ကြုံနေရတဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခံစားခွင့်ကိစ္စတွေ အပါအဝင် ဖွံဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေကိုပါ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM) ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အီးယူရဲ့ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေးမရုပ်သိမ်းဖို့ အလုပ်သမားအဖွဲ့ရော အစိုးရကပါ ထုတ်ဖော်ပြော